मनीषालाई पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जलि दिनबाट रोकियो – NepalajaMedia
मनीषालाई पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जलि दिनबाट रोकियो
January 11, 2021 55
अभिनेत्री तथा सामाजिक अभियन्ता मनीषा कोइरालालाई पृथ्वीनारायण शाहको २९९ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जलि दिन प्रशासनले अवरोध गरेको छ।
केही दिनअघि देखि नै पृथ्वी जयन्तीका दिन मनीषाले सबैलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गर्दै पृथ्वीनारायण शाहको स्मरण गर्न र उनीप्रति सम्मान व्यक्त गर्न आह्वान गरेकी थिइन्।
सोमबार पृथ्वी जयन्तीका दिन रत्नपार्कबाट एउटा समूहको नेतृत्व गरी पृथ्वीनारायण शाहप्रति श्रद्धाञ्जलि दिन सिंहदरबारतर्फ जाँदै गर्दा मनीषालाई भद्रकालीमै रोकिएको थियो।
‘मलाई भद्रकालीमा रोकियो, राष्ट्रको नायकप्रति श्रद्धाञ्जलिसम्म दिन दिइएन,’ उनले भनिन्। भद्रकालीबाट प्रहरीले सानो समूहबाट मात्र मानिसहरुलाई सिंहदरबारतर्फ जान दिएको थियो। सहभागीहरुका अनुसार श्रद्धाञ्जलिका लागि तयार गरिएका मालाहरु चुँडालिएका थिए भने प्रहरीले सहभागीहरुलाई भद्रकालीमै अवरोध गरेको थियो।
‘पृथ्वी जयन्तीका दिन धेरै मानिस भेला हुन नपाउन् भनेर प्रशासनले गरेको नियोजित षड्यन्त्र हो यो,’ एक सहभागीले भने। पृथ्वीनारायणप्रति श्रद्धाञ्जलि दिँदै मनीषाले सिंहदरबारमा आफ्ना केही अभिव्यक्ति राख्ने तयारीसमेत गरेकी थिइन्।
‘मैले राष्ट्रनायकप्रति श्रद्धाञ्जलि दिन चाहेको थिएँ, तर प्रशासनले रोक्यो,’ मनीषाले भनिन्।
अभिनेत्री कोइरालाले पृथ्वीनारायण शाहको श्रद्धाञ्जलि दिने क्रममा बोल्न तयार पारेको अभिव्यक्ति:
पृथ्वीनारायण शाहले सूर्य र चन्द्रमाको झण्डा फहराएर टुक्राटुक्रामा विभाजित बाइसे चौबिसे राज्यहरुलाई सूर्य र चन्द्रमामा अंकित झण्डामुनि एक सूत्रमा बाँध्ने काम गरे। उनले नेपाल राष्ट्रको निर्माण नगरेको भए, हामीले के एक स्वाभिमानी र स्वतन्त्र नेपाली हुनुको गौरव गर्न सक्ने थियौँ र! के बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी, जनक र सीता जन्मेको मिथिला र विश्वको ताज सगरमाथाको देशको नागरिक हुनुको गौरव गर्न पाउने थियौँ त!
करीब ३०० वर्षअगाडि हामीलाई साझा ‘नेपाली’ राष्ट्रिय पहिचान दिने श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वी नारायण शाहलाई श्रद्धाञ्जली दिन हामी यहाँ भेला भएका छौँ उहाँको जन्मदिनका अवसरमा । यहाँ हामी समस्त विवेकशील र स्वाभिमानी नेपालीहरुका प्रतिनिधिका रुपमा उपस्थित छौँ, हाम्रा राष्ट्र निर्मातालाई हामीले ससम्मान सम्झनुपर्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्न।
पृथ्वीनारायण शाहले शासन गर्नका लागि मात्र भौगोलिक एकीकरण गरेका थिएनन्। उनले एउटा सभ्य, उन्नत, राजा र जनताबीच सहकार्यमा आधारित आधुनिक राज्यको जग पनि हालेका थिए। आज हामीलाई मुलुकमा कुन विषयले बढी पिरोलिरहेका छन् त! इतिहासमै पराधीन नरहेको हाम्रो यो मुलुकले स्वतन्त्रता गुमाउला कि! हामीले टाढा र नजिकका मुलुकहरुप्रति समानताका आधारमा हैन, समर्पणको व्यवहार त अपनाएनौँ?
आज शासक भष्ट बनेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले भनेको जस्तो ‘जनता मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ’ भन्ने मान्यताको ठीक विपरीत दरबारमात्र मोटाएका छन्। जनता दरिद्र र गरिब भएका छन्, यस्तो अवस्था किन आयो?
आज मुलुकलाई ‘एक हैन खण्डित’ बनाउने षड्यन्त्रमा हामी किन छौँ? छोटकरीमा पृथ्वीनारायण शाहले जे भने र जे गर्न चाहन्थे, त्यसको ठीक उल्टो हामीले गरिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ।
२०६३ वैशाखको परिवर्तन लगत्तै राष्ट्र निर्माताको ‘हिरो’ हैसियत खोसेर उनलाई खलनायक बनाउने प्रयास नै राष्ट्रविरुद्ध षड्यन्त्रको शुरुवात थियो। आउनुस् आजको दिन हामी प्रण गरौँ, त्यो षड्यन्त्रलाई समूल नष्ट गर्न, उनी र उनका सिद्धान्तलाई सदा सम्मान गर्न र नेपाललाई एक स्वतन्त्र समृद्ध र एकतावद्ध राष्ट्रका रुपमा अगाडि लैजान।
Prev‘धूम ४’ मा भिलेन बन्दै दीपिका
Nextनिर्वाचनको तयारी नरोक्ने आयोगको भनाइ, प्रचण्ड-नेपाल समुहको आग्रह अस्वीकार
प्रेमिकासंग छिट्टै विवाह गर्ने बताउने दुर्गेश थापा बने रियलमै बुवा, बधाईको ओईरो
सगरमाथाबारे विवादित कार्यक्रम बनाउने भारतीय पत्रकारलाई सरकारकै खर्चमा सगरमाथा लगिएको
कोरोना संक्रमणबाट होटल व्यवसायी तथा पूर्व मेयर गिरीको मृत्यु